Varivarian’ny akaiky tsy mahita ny lavitra | NewsMada
Varivarian’ny akaiky tsy mahita ny lavitra
Vaovao tsy mety tapitra ny “Raharaha Claudine Razaimamonjy”. Mihamiakatra ny tahan’ny maripana raha tarafina amin’ny fifanenjanan’ny sokajin’olona sy sokajin-drafitra tompon’andraikitra samihafa. Farany izao, izay azo antoka fa mbola hitohy any amin’ny rafitra hafa, mifamaly mivantana ny governemanta tarihin’ny praiminisitra, andaniny, sy ny sendikan’ny mpitsara (SMM), tarihin’ny filohany, ankilany. Olona ambony eto amin’ny firenena, manana ny hajany sy ny voninahiny, manana andraikitra saro-pady avokoa ireo voalaza ireo, fa dia izao mifamaly, tsy mifampitsitsy, samy maneho azy ho “papango anaty katsaka, samy babany avokoa”. Saingy, tsy hitsabaka mivantana amin’izany ny mpamaky sy ny mpitazana, satria tsy hanana ny lenta amin’ny fifanandrinan’izy ireo ny maro.
“Varivarian’ny lavitra ka tsy mahita ny amban’ny maso”, hoy ny Ntaolo. Tsy voatery ho marina io filazana io, fa afaka disoina koa ny mifamadika aminy. Mihevitra ny sasany, fa tsy mahakasika ny isan-tokantrano sy ny fiainam-pirenena ny sokatra aondrana antsokosoko any ivelany. Tato anatin’ny telo andro, telo ny tranga trafika sokatra tratra, roa tany ivelany (ny alahady teo) ary teto Madagasikara ny iray (ny talata). Amin’ny maha fampahalalam-baovao, serasera, fanabeazana ny gazety, omen-tsiny ve raha hanao fanamarihana mikasika ity tranga ity, satria azo tsorina fa tranga tsy mbola fahita teto amin’ny firenena ny toy izao, amin’ny lafiny trafika harena voajanahary, ankoatry ny andramena.
Amanaliny dolara ny vidiny, 1.000 dolara ny iray sentimentatra, hoy ny mpahay azy eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Tsy hanao ity trafika ity ny eto amintsika raha tsy efa mahafantatra ny vidiny andraisan’ny vahiny azy. Saingy, toa mangina ny tompon’andraikitra na efa voasazin’ny rafitra iraisam-pirenena Cites hatry ny taona maro aza, vokatry ny tsy fandraisana andraikitra henjana. Maivana ny sazy, tsy misy ny olo-maventy nosamborina sy naiditra am-ponja.